Cubot KingKong 5 Pro, ilay finday misy Android 11 ho an'ny tontolo masiaka | Androidsis
Manuel Ramirez | | Fitaovana Android
Efa niresaka isika andro vitsivitsy lasa izay ny fahatongavan'i Cubot KingKong 5 Pro eny an-tsena ary, araka ny anarany, dia novolavolaina sy noforonina mba hahatafavoaka ireo tontolo feno fitakiana ireo.
Ny fahavelomana dia midika fa afaka manohy miasa miaraka aminy mandritra ny fotoana lava isika na eo aza ny zava-tsarotra, noho izany dia lasa fitaovana finday mety indrindra izy amin'ny toe-javatra iasantsika amin'ny fonon-tànana, na ny orana na ireo mpiasa ivelany manelingelina toa ny fotaka.
1 Rehefa mitaky finday mahatohitra sy mafy izahay: Cubot KingKong 5 Pro
2 Batterie mahagaga indrindra
3 Antsipiriany hafa manan-danja amin'ny Cubot KingKong 5 Pro
4 Ny volanao (galeri-tsary)
5 Aiza no hividianana azy ary ohatrinona ny amidy
Rehefa mitaky finday mahatohitra sy mafy izahay: Cubot KingKong 5 Pro
Manomboka amin'ny fanoherana izahay, satria io no tena tanjony. Ilay azontsika atao mahatsapa fa miatrika finday mafy izahay fa tsy ireo marefo amin'izay dia mila mitandrina tsara amin'ny toerana andao azy isika ary mitandrina hatrany fa tsy eo akaikin'ny singa rehetra mety hanakorontana ny efijery izy ireo.
El Cubot KingKong 5 Pro dia voamarina IP68 sy IP69K ary MIL-STD-810G. Ka manana finday iray mahazaka rano hatramin'ny 1,5 metatra mandritra ny 30 minitra farafahakeliny. Tahaka ny ahafahantsika matoky fa kapoka na vovoka no hikapohana azy, na tsy dia mijaly loatra amin'ny riandrano.
Raha mieritreritra ny hividy finday amin'ity karazana ity isika, dia satria izy io koa miaraka amin'ny rafitra fametrahana GPS, GLONASS ary Beidou, avy amin'izay voalaza momba ny fivoahana any an-tendrombohitra na any amin'ny faritra lavitra izay tsy ananantsika ireo fampiononana efa nahazatra antsika ireo. Eto isika afaka manome toky ny tenantsika amin'ity finday natombok'i Cubot ity.
Batterie mahagaga indrindra
Avy amin'ny Cubot KingKong 5 Pro dia afaka milaza izany isika Manana bateria 8.000mAh izy io ary izany dia hahafahantsika miala amin'ny fametrahana azy. Ny fahafantarana fa raha mandeha mitsangatsangana na miasa any an-tendrombohitra isika dia tsy hanana fotoana an-tanana akaiky hisintona fifandraisana amin'ny tambajotra elektrika, noho izany ny fampiasana ny maody fitehirizana bateria, raha tsy misy olana dia afaka mandany ora sy ora maro isika raha tsy mampifandray azy.
Ary miresaka momba inona isika izy ireo dia 550 ora fitsaharana ho finday mety indrindra amin'ireo toe-javatra ireo; na tsotra fa hoe tianay ny tendrombohitra ary hiala tsy tapaka izahay. Raha efa misintona ny finday isika handraisana horonantsary, sary na lalao hafa ho fialamboly dia afaka manao izany isika manome toky anay amin'ny bateria roa andro.
Mba hanomezana toky bebe kokoa antsika aza, ny Cubot KingKong 5 Pro manana Android 11; ary fantatsika tsara ny fomba fanatsarana ny rafitra Android ho an'ny bateria ary arak'izany ny fampitomboana ny fampiasana ny tsirairay amin'ny mAh izay ananantsika ao anaty bateria.
Antsipiriany hafa manan-danja amin'ny Cubot KingKong 5 Pro
Saingy tsy ny zava-drehetra ao anatiny ny finday dia fanoherana sy bateria, fa ny singa hafa kosa dia tena manandanja toy ny sary. Miverina amin'ny tranga misy ny tendrombohitra isika ary afaka maka sary tsara amin'ireo sary ireo na koa horonan-tsary tadidy dia zava-dehibe.
Miditra mivantana miaraka amina lamina telo izahay ao aoriana izay misy a 48 lens AI, iray hafa amin'ny 5MP ho an'ny sary makro ary iray hafa ho an'ny 0.3MP ho an'ny sary saro-pady. Eo anoloana, ho an'ny selfie dia mahatratra hatramin'ny 25MP ary arak'izany dia mameno fanaingoana mahaliana mba hahafahantsika maka sary tena tsara amin'ireo tontolon'ny dia hitetezantsika ireo.
Ny antsipiriany hafa hikajiana momba ity finday Cubot vaovao ity dia Android 11, RAM 4GB, fitehirizana anatiny 64GB, NFC ary na i Google Pay aza.
Ny volanao (galeri-tsary)
Mamela anao izahay sary firy no azonao jerena akaiky Ary mba hahitanao ny antsipiriany eo anoloana sy ao aorin'ity finday mahatohitra avy any Cubot ity.
Aiza no hividianana azy ary ohatrinona ny amidy
Azo antoka fa tonga eto ianao mba hanontany ny vidin'ity finday mahaliana ity. Ary izany ve Izy io dia eo amin'ny tolotra fampidirana amin'ny vidiny € 215,34.
En ny rohy mividy dia avy amin'i Aliexpress.
Izahay koa tsy te-hanaotra anao, Na dia tsy ho ela aza io tolotra io, Ka raha mikasa ny hanana finday mahatohitra hananana ao amin'ny trano faharoa ianao na satria mila toetra mitovy amin'izany ianao, dia aza mangataka ela.
Avy amin'ny Cubot KingKong 5 Pro anananao ny fampahalalana rehetra avy amin'ny tranokalanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Cubot KingKong 5 Pro, finday misy Android 11 natao ho an'ny tontolo mitaky be fitakiana